Famaritana ara-teknika Vivo X23 nambaran'ny AnTuTu | Androidsis
Ny Vivo X23 dia mivoaka ao AnTuTu miaraka amin'ny Snapdragon 670
Ny smartphone an'i Vivo manaraka, ny X23, dia nandehandeha teny AnTuTu fotsiny, ny refin'ny fandrefesana ny heriny ary naseho ny mari-pahaizana ara-teknika momba ny fahalianana, toy ny rafitra fiasa izay entiny, ny processeur, GPU, RAM, toerana fitehirizana anatiny ary ny famahana ny efijery entiny.
raha mbola hanomboka amin'ny 6 septambra ny fitaovana, toetra maromaro an'ity antonony afovoany ity no efa tafaporitsaka. Noho izany, ho fanampin'ny angon-drakitra efa nambara teo aloha, ireo farany dia nampiana mba tsy hamela toerana malalaka ho antsika hahagaga amin'ny fotoana fampisehoana azy ireo.
Araka ny nambaran'ny AnTuTu, ny Vivo X23, izay efa voasoratra ao amin'ny tahiry AnTuTu ambanin'ny kaody "vivo V1809A", anarana iray izay nandalovany koa Geekbench, dia miaraka amin'ny Android 8.1 Oreo, ilay teo alohan'i Android 9.0 Pie. Ary koa, momba ny andinindininy, manana Qualcomm System-on-Chip Snapdragon 670, izay misy valiny valo, izay misy Kyro 360 roa miasa amin'ny 2.2 GHz ary enina Kyro 360 amin'ny 1.7 GHz. Ity, ahoana no fomba hafa, miaraka amin'ny GPU Adreno 615.
Ilay lisitra koa dia nilaza tamintsika izany ny terminal dia manana RAM 8 GB ary fahatsiarovana anatiny 128 GB, izay miteraka fanaingoana tena mahaliana raha mandinika ilay processeur isika. Nasongadinay izany satria, hatramin'ny nahatongavany teo an-tsena farany teo, matetika ny puce dia misy RAM 4 na 6 GB, farafaharatsiny, ary ROM 32 na 64 GB.
Amin'ny lafiny iray, AnTuTu dia milaza amintsika fa ny Vivo X23 dia mametraka ny efijery FullHD + misy vahaolana 2.340 x 1.080 piksel, izay fintinina amin'ny endrika tontonana 19.5: 9. Mandritra izany fotoana izany dia miteraka isa 157.271 XNUMX ny toetra voalaza rehetra.
Farany, hamafisina na holavina ity fampahalalana ity amin'ny 6 septambra rehefa manambara ny telefaona any Chine i Vivo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Vivo X23 dia mivoaka ao AnTuTu miaraka amin'ny Snapdragon 670
Apple dia hanolotra ny taranaka vaovao amin'ny iPhone sy Apple Watch amin'ny 12 septambra